गोबिन्द के.सी. को मागपत्र भित्र लुकेको शास्वत::Nepal's Online News Portal
गोबिन्द के.सी. को मागपत्र भित्र लुकेको शास्वत
बिहि, साउन ३, २०७५
डा गोबिन्द केसी को अनसन ले ल्याएको तरंग ले देश खलबलिएको को छ। केसी को अनसन ले स्वास्थ्य क्षत्र तमाशा र कर्तब्य बिमुख हुदै गएको छ। केसी का माग केहि हद राम्रा छन यसको समर्थन हुन्छ र गर्नु पर्छ पनी तर बार्ता गर्न सरकार लाई जुम्ला को बेड मा बोलाउने उनको घमण्ड विरुध्द सरकारले एक्सन मा गएको ठिकै पनी छ। किनकी गोबिन्द केसी को मुटु मा टेकेर राजनीति गर्ने भजन मण्डली हरुको असलियत निकाल्नु पर्छ।
चिकित्सक ले गरेको आन्दोलन हद सम्म ठीक छ। तर प्रतिपक्ष ले गरेको केसी को ब्याख्या राजनीतिक पुरबग्रही मात्र हो। देश सबै को मस्तिष्क ले चलने चलायमान भूमण्डल हो। यहाँ केसी र अन्य कुनै ब्यक्ति को शतप्रतिशत माग बिनासोच बिना तैयारी बिना अध्यन पूरा गर्नु पर्छ भन्ने छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र सग आबद्द डाक्टर र त्यसको संचालन गर्ने पक्ष को अप्रत्यक्ष घुसपैठ नै भएको आशंका उत्पन्न भएको छ। केसी को माग मा लुकेका केहि रहस्यमय तथ्य हेरु यस्ता छन-
म: अध्यादेश संसद मा छलफल को लागि लैजाने हो कुनै छलफल गर्न वा परिमार्जन गर्न नै नपाउने संसद ले ताली बजाएर जबरजस्ती पारित गराउने ऐन कहाँ छ? उपाध्यक्ष पनि गोबिन्द केसी जी सग भेरिफाइड भएको हुनुपर्ने हो या काबिलियत हेरेर संसदीय सुनुवाई मार्फत नियुक्ति हुनु पर्ने भन्ने बिसय मा अनसन गर्ने निउ मात्र देखिन्छ।
म: अबधारणा ठीक छ तर मापदण्ड मुताबिक मेडिकल कलेज खोलदा लगानिकर्ता वा सरकार ले गरेको खर्च अनुसार अध्यन अध्यापन गराउन सकिन्छ की सकिदैन भंने अनुमानित तथ्यांक डाक्टर केसी सग छ की भूगोल हेरेर पब्लिसिटी को लागि मात्र मागपत्र मा समाबेश गरिएको हो? यदि कलेज स्थापना भए अत्याबसेक सेवा दिन त्यहाँ को भूगोल ले साथ दिन्छ? कतै यो माग प्रधानमंत्री को चुच्चे रेल जस्तै त हुने होइन।
म: माइती घर मण्डला र मेडिकल कलेज बीच के कनेक्सन छ? तपाइको आन्दोलन मेडिकल माफिया सग की माइतिघर मण्डला सग हो। के त्यो ठाउँमा पार्टीको झण्डावाल ब्यक्ति हरु तपाइको नाम मा नारा लगाइरहेका छन उनीहरु को लागि तपाई लडीरहनु भएको पो होकी? यो स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कुन ऐन मा पर्दछ?
४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहऱ्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
म: दोषी लाई कारबाही त अबश्य नै हुनु पर्दछ। यसमा दुइमत छैन। जून त्रिबि ले लिएका अधिकार छन बिगत मा दिइएको अधिकार दिदा भएको त्रुटि लाई फेरि दोहोरीन नदिने परिमार्जित मस्यौदा बनाएर सरोकार वाला सबै सग आबश्यक परामर्श गरि स्वयत्ता दिनु पर्ने होइन र? अनसन को जोड़ ले दिएको अधिकार कतीसम्म योगात्मक हुन्छ। यसमा अली प्रष्ट माग राख्नु पर्ने हो कि।
म: प्रतिबेदन दिदा आबश्यक संभावना हरुलाई समेटने गरिन्छ। त्यसैमा हुनै पर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हठ भन्दा पनी आधार र कारण सहित डा केसी ले छलफल मा राख्नु पर्ने देखिन्छ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
म: यो कार्यविधि लाई खारेज भन्दा पनी परिमार्जन गर्नु पर्ने चाही देखिन्छ। अस्पताल को बेड बाट यस्ता संबेदनशील ऐन लाई मोहर छाप को माग राखदा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिणाम नै शून्य हुन्छ भन्ने कच्चा बिस्वाश मात्र हो। अन्य बुदा हरु सबै जायज छन।
म: मेडिकल माफिया राष्ट्र का गम्भीर अपराधी हुन। सरकार ले यस्ता बेथिति लाई नियन्त्रण गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएको मा मेरो पनी असंतुष्टि छ। नया खोल्ने मेडिकल को संस्थापन मा डाक्टर साप को अनसन नहोस।
डाक्टर गोबिन्द केसी लाई बचाऊं भनेर आन्दोलन गर्ने हरु केसी लाई काठमाण्डौ ल्याउन खोज्दा झड़प र नारा मा उतरिनु ले ति ब्यानर बोक्ने हरु बास्तविक समर्थक हुन की केसी को अबसान को कामना गरिरहेका छन दुबिधा हुन्छ। केशी का कतिपय माग राम्रा भए पनी राजनीतिका ठेकेदार हरुले हालीमुहली गर्दा झन गंभीर परिस्थिति सृजना गर्नु मात्र हो। यसतर्फ सबै निकाय संयमित र गम्भीर हुनु आबश्यक छ।